Mgbe m nọ na IRCE, m bịara ịnọdụ ala na Intuit's SVP of Payments and Commerce Solutions, Eric Dunn. Ọ bụ ihe nlele anya n'ime uto Intuit n'ahịa azụmaahịa na ecommerce. N'ezie, ọtụtụ mmadụ anaghị achọpụta ma ego karịa Intuit karịa PayPal ma a bịa n'ịzụ ahịa n'ịntanetị (ọ bụrụ na ị gụnyere ọrụ ha na-akwụ ụgwọ).
Ihe ị nwere ike ọ gaghị amata bụ na ịgbanwee gaa EMV na-agbanwekwa ụgwọ maka ndị na-ere ahịa na onye ọ bụla ọzọ na-anabata kaadị akwụmụgwọ site na kaadị swiper. Nke a bụ nkọwa si Intuit: